Pele Ucheche Nhau Plus Untold Biography Facts By LifeBogger
musha Classic FOOTBALLER Pele Ucheche Nhau Plus Untold Biography Facts
Pele Ucheche Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutambo mwari uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'Black Pearl.'. Pele Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Hongu, iye ndiye ndiye chete muchecheti aipfuura miganhu yemasikirwo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Edson Arantes do Nascimiento anozivikanwawo sePele akaberekerwa muTrês Corações, Brazil, naMujo João Ramos do Nascimento AKA Dondinho (baba) uye Mai Celeste Arantes (Amai).
Akakurira muguta re Três Corações, munharaunda ye Minas Gerais, anenge 200 mamaira kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwe Rio de Janeiro. Pele akaberekwa semwana wekutanga wemhuri yeDondinho. Paakaberekwa, vabereki vake vakamutumidza 'Edison ' mushure mokutanga Thomas Edison. Akakurira zvakare ane mazita ekunyorera vana 2; "Dico naPele". Mhuri yake yakamupa zita rekuda "Dico" zvinoreva kuti 'Mwanakomana wemurwi'. Baba vaPele, vanozivikanwawo seDondinho vaifungidzirwa nevakawanda sevarwi mumamiriro ezvinhu. Akanga ari musikana ane simba.
Nickname "Pele" akauya kubva kukirasi yake kuchikoro. Pele akanga ari munhu anofara uyo asingadi kufunga kuti shamwari dzake dzinomunetsa uye kumusvitsa kuchikoro. Aizonzwa kuseka kunyange kana achinetseka. Kunyange zvakadaro paiva nemiganhu. Shamwari dzake dzakashandisa nzira dzake dzakaipa. Kare kare kuchikoro, Pele aishandiswa kuzivisa zita remunhu waaida weVasco da Gama varo 'Bhira' as "Murwi". Nzira yake isina kururama yekuzivisa zita racho yakaita kuti vaanodzidza navo vamuseke. Nokudaro, vakasarudza kumupa zita rezita "Pele" ane ruzivo ruduku pamusoro pekuita kwahwo kumutambo webhola. Ichokwadi, vaaidzidza navo havana kumboziva kuti raiva zita regoridhe. Zita rakapiwa kunze kwejoke. Zita rakazova guru, guru kupfuura 99.9% mazita ayo nyika yakambozivikanwa.
Maererano nebvunzurudzo, Pele akambotaura kuti zita raive pakutanga raiva zita rekunyangarika rehuduku, raasingadi. Paakabvunzwa Nei? izvi ndizvo zvaakataura ...
Yakanga isiri zita rekudaidza raidiwa ndiri mwana. Mhuri yangu yakadana ini Dico, vakaroorana vangu mumugwagwa vakanditumidza Edson. Pavakatanga kundidana Pelé ini ndakanga ndisingadi kuti vaite. Ndaifunga kuti raiva zita rakasvibiswa. Iye zvino iwe unotozviona zvakare muBhaibheri. MuchiHebheru Pele zvinoreva chishamiso. Mumwe mudzidzi wezvebhaibheri akazviziva izvi, ndokundiudza. Izvo zvinoreva, izvo zviri muBhaibheri.
Kare kare apo mumwe munhu akati, "Hei, Pele," ndinodanidzira zvakare uye ndinotsamwa. Pane imwe nguva ndakarova mumwe waaidzidza naye nekuda kwei uye ndakawana kusamiswa kwamazuva maviri. Izvi, zvakagara zvichiti, hazvina kuitika. Vamwe vana vakaona kuti zvakanditsamwisa saka vakatanga kundidana Pele zvakare. Ipapo ndakazoona kuti zvakanga zvisiri izvo kwandiri zvandiri kudanwa. Iye zvino ndinoda zita - asi panguva iyoyo rakandikuvadza pasina kumagumo. "
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Boy Boy Dream
Upenyu hwaPele hudiki hwekuva pivha hwakaderedzwa nechiitiko chakaipa apo ndege yepanyika yakaputika pedyo neimba yake, ichiuraya mutyairi uye vose vaifamba vachienda.
Vechiduku Pele vakambosiya pamba pavo ndokuenda kuchipatara kundotarisa chitunha uye, paakaona chitunha chevatyairi, akasarudza kuti kurota kwake mukomana kuchapera. Zvechokwadi, basa rekubhururuka ndege rakanga risina iye.
Sezvo rombo ringave rwuri, ruzivo rwababa vake rwokukurudzira rwakatambanudzirwa kumatambo pamwe chete, uye Dondinho akava Pele wepamberi wepamusoro wepamberi mutambi webhola. Pele anorondedzera kutsigira kwaamai vake pamusana pekuda kwake mwana kuti ave mutyairi wenyanzvi. Akange asina kufara kumuona achiita bhora rekuita basa.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kusimuka Kubva Paurombo
Mhuri yake yakarohwa nourombo. Pele pachake haasi iye mwana ane ruzivo. Kare kumashure, mari yepahomwe yaakapiwa yakanga isingakwanisi kutora bhora. Sekomukomana, Pele aifamba achitamba neja so stuffed nepepa sezvo asingakwanisi kutenga bhora kuti agare mumba make. Pane imwe nguva, akatamba bhora nemamango panguva yekuputika. Somugumisiro mari shoma yaaiva nayo, Pele aifanira kutora mabasa akasiyana-siyana semwana kuti awane mari yakawedzerwa. Akagamuchira zvidzidzo zvake zvepakutanga mubhokisi kubva kuna baba vake uye akatamba kumapoka akasiyana-siyana emamate muhuduku hwake.
Izvo hazvina kutora nguva refu Pele asati aona kuti akanga akomborerwa netarenda yepamusoro yemutambo. Akabva atanga nemutambo webhora rake. Izvi akazviumba paaita zvakawanda zvemukati yebhola. MuBrazil panguva iyoyo, bhora reIndoor raive richizivikanwa.
Pepera zvechokwadi ndiye chete vana kuti vatonge nyika yose. Yaiva huchenjeri hwake hunodonha, hupfuura, hukuru uye chinangwa chekuita mano anomuita kuti ave nechigarire.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
BABA: Baba vaPele, João Ramos do Nascimento AKA Dodinho akaberekwa musi we2nd weChishanu 1917. Akanga ari muBrazilian soccer kurwisa nzvimbo yepamusoro uye akanga asiri baba, asi mutungamiri uye shamwari yakanakisisa kumwanakomana wake, Pelé.
Pele (Kuruboshwe) uye Baba, Dodinho (Kurudyi)
Dondinho akarovera mapoka maduku mashomanana panguva yemakore ake emakore. Kunyangwe iwe iwe haana kufanana nemwanakomana wake, akaita chimwe chinhu mwanakomana wake aisakwanisa kurova mubasa rake rakanaka. Iwe uchazoziva kuti iwe sezvaunoverenga.
Kare kare mumazuva ake ekutamba, bhora rakanga riri pakati pebasa risina kubhadhara. Zvakanaka, vateereri vaiva pakati pevarombo zvikuru munyika. Nokudaro, Dondinho akanga ari murombo. Akabvisa pakarepo nekuda kwekuda kuita mari yakawanda kubva kune mamwe mabasa. Mushure memakore ekurasikirwa kwebhola, Dondinho akatora basa rechipatara rakachena apo akawana mari yakawanda kubatsira rubatsiro rwemwanakomana wake.
Dondinho akadzidzisa Pele nzira yekufamba nenzira yakarurama, kuita unyanzvi hwokugadzira, kushandiswa kwemafudzi epafudzi kusiya vanozvidzivirira kuti vafe, uye kuchinja nekukurumidza kukurumidza kusvika kune avo vanodzivirira. Uye nepamusoro nepamusoro pehutano hwebhora, Pele akadzidza chimwe chinhu. Akadzidza kuva murume chaiye paaipedza nguva nababa vake. Vechidiki Pele vakawana mufaro nekusuwa kubva kumitambo yekushambadzira yaive nayo nababa vake. Uyezve, aida nzira iyo baba vake vakatora pfungwa dzake zvakasimba, sokunge kuti aiva murume.
Kunyange zvazvo Dondinho aishanda mudhidhi, aizorangarira nezvevatambi vakakurumbira vaakambotarisana naye, uye achitaura nezvehama yake chaiye, uyo akaratidza kuvimbiswa kunoshamisa semutambo asi akafa pa 25.
Zvakawanda zvebasa rake hazvina kukwana. Zvisinei isu tinoziva kuti mumakore anenge gumi nematanhatu pamatenho ematope eBrazil, Dondinho akakwanisa 893 vavariro mumitambo ye775 isina kubvisa 19 mumitambo ye6 yeBrazil.
Dondinho aiva nhamba yekare 9 apo mwanakomana wake Pele akaidza nhamba ye10. Pele akasarudza basa rakadzika raaizogona kugadzira kurwisa uye kuuya mberi.
Zvino ichi ndicho chiitiko. Dondinho akambowana zvishanu zvitsva nemusoro wake mumutambo mumwe chete. Pelé aigara achida kurova rekodhi asi haana kumbokwanisa kubudirira kunze kwebasa rake. Dondinho anotungamira zvinangwa zvichiri kungova nyika isina kukodzera uye rePele iye pachake haaikwanisi kutenda. Paakabvunzwa nezvazvo, Pele akambotaura; "Mwari chete ndiye anogona kutsanangura kuti baba vangu vakazviita sei."
Uchenjeri hwaDondinho hunogona kungoratidzwa pano sezvatakurangarira iye paanenge achitaura pamusoro peMwanakomana wake weCentary 'Pele'. Dondinho akararama kwemakore 89. Akafira musi wa 16 November 1996 muSão Paulo.
AMAI: Pele aiva nemayi asina kunyanya kushevedza ainzi Mrs Celeste Arantes. Aimbova murandakadzi asati atendeukira kumudzimai wenguva yakazara yeimba. Zvave zvataurwa kumurume wese mukuru ndiye mukadzi mukuru. Iyi nyaya, imai mukuru.
"Amai vangu vakadzi vanofadza," akadaro Pelé. "Anogara achitarisira mhuri yangu uye dzidzo yangu, uye akandidzidzisa nzira yekuremekedza vanhu. Akandipa mukana wokudzidza kuremekedza vanhu. "
Vakanga vava pedyo chaizvo sezvo Pele aivawo pedyo nababa vake. Zvinonakidza, amai vake vakanga vasingagara vaine Pelé muduku kuti ave mutambi wenhabvu. Dona Celeste, uyo aigara achitarisa vana vake, akaona bhora soviri a "Kufa kwekufa kutsvaka" uye "Nzira yakarurama yehurombo." Aida kuti Pelé afunge nezvekudzidza kwake panzvimbo.
Akanga akafanana nengirozi yakagara pamafudzi ePele, nguva dzose achimukurudzira kuita zvakanaka, tsika, uye inovaka. Maererano naPele, "Mumakore iwayo okutanga, paakandibata ndiri kutamba bhora, aizondipa mazwi akanaka. Uye dzimwe nguva zvakanyanya kuipa! "
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Imba yake yekutanga yaiva naRosemeri dos Reis Cholbi mu1966.
Vakaroorana vakakomborerwa nevanasikana vaviri. Vakarambana muna 1982. Kubvira ku1981 kusvika 1986, aive achida kuratidza rudo naXuxa, uyo, akabatsira kuva muenzaniso. Xuxa aingova 17-year-old pavakatanga kufambidzana.
Muna 1994, akaroora nyanzvi yepfungwa uye munyori wevhangeri Assíria Lemos Seixas. Pelé akadzima misodzi paakayeuka kufara kwaakaitwa panguva yemuchato wake naAsiria Seixas Lemos musi waApril 30, 1994 mumuguta weRouife, Brazil.
Zvinopfuura mapurisa emapurisa e170 akachengetedza vaviri vacho nevakashanyira 300 kuAnglican Episcopal Church. Icho chaiva chikwata chechipiri kune vose. Akabereka mapatya, Joshua naCeleste. Vakaparadzana mu 2008.
Musi waJune 2016, Pele, 75, akaroora Marcia pamusangano muduku wechitendero muGuaruja pamhenderekedzo yeSao Paulo, Brazil.
Nyeredzi yemauto inotora basa yakange iine ukama naMarcia kwemakore matanhatu vasati varoorana.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -LifeStyle
Kana zvasvika kune mararamiro ehupenyu, humwe unhu hwePele hunogona kunzwa. Chokutanga, iye anoda kuda mifananidzo. Pasi pane Pelé yakashongedza iri pamberi peMercedes-Benz mu1970. Mufananidzo wake wakajeka wakanga wakakodzera, sezvo paa-mumunda wekutamba wakamupa zita rezita rokuti "O Rei Pelé," zvichireva "King Pelé."
Kutaura nezveMararamiro, imwe pfungwa inokosha yekucherechedza. Anoda kutamba gitare yake. Mumufananidzo uri pasi apa, Pelé anozorora nehotera yehotera neguitar yake mushure mokunge 1970 World Cup muMexico. Mutambo wacho waiva mumhanzi kune nzeve dzake, sezvo Brazil yakataura musoro wayo wechitatu weChite Cup.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -A Media Target & National Treasure
Pelé anosemwerera paanoshamba muimba yekugezera muna May 1963. Akanga ari nhepfenyuro pane zvose zvaaifamba, achiva muchengeti wemutambarakede.
Hurumende yeBrazil yakaratidza Pelé mutoro wepamutemo wehurumende mu1961 kuti amudzivise kuti arege kubviswa kunze kwenyika.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Rudo rwaNeymar
Zvose zviri nani neshamwari uye dzisingatauriki. Maererano neNeymar, "Kuchinja kwoupenyu hwangu kwaiva apo mambo webhola, Pele akatanga kundidana. Akandiudza kuti ndite Chelsea ". Neymar yakambofananidzirwa kutamba nemhemberero. Pele anotenda Neymar chete inofanira kuvandudza musoro wake kukwanisa kudarika Real Real's time-leading goalcore Cristiano Ronaldo.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Hondo Yehurumende Inorega Moto
Kuti uchengetedze mari iri kuvhara mukati, chikamu chekubhadhara Pele mubairo, chikamu chekuita mari yekambani kubva pamubairo wavo, Santos akatarisa nyika iri kutamba nepamusoro-soro shamwari, pamutengo weimba yavo yepamba. Mumwe ushamwari mukati Lagos, Nigeria akaita kuti mapoka maviri aya Nigerian Civil War kudana kusimwa kwe48 kuitira kuti vamuone achitamba. Vose vaviri veNigerian Federal uye Biafran Mabanduki vakatarisa Pele vachitamba vachishanyira rudzi rwavo rwakarohwa nehondo. Pele akashamisika paakaona Nigeria kwekutanga.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Basa Rokutanga & Achibudirira
Pele akabhabhatidzwa naSantos paaiva 15. Akatora zvinangwa zvina pachikwata chake chechikwata mumutambo wakatarisana neChishanu Korinte musi waSeptember 7, 1956.
Akanga aine ruzivo kunyange muhuduku hwake, achitungamira 1958 Brazil National Team kuUnited Cup Championship pamusoro peSweden pazera re 17.
Pana 17, Pele akazova muduku kuna vose akakunda muNdebe yeNyika. Akarongawo kaviri mukupedzisira kupikisana neimba yeSweden. Chinangwa chake chokutanga apo akazora bhora pamusoro pomudziviriri kare kuvhiringidza mukona yemambure, akasarudzwa seimwe yezvinangwa zvakanakisisa munhoroondo yeNyika Cup.
Ichitevera chinangwa chechipiri chePelé, mutambi wechiSweden Sigvard Parling dai gare gare vachataura; "Pelé paakawana chinangwa chechishanu muChigumo ichocho, ndinofanira kutendeseka uye ndichiti ndainzwa ndichikumbira"
Yakanga iri muChitombe Yenyika 1958 iyo Pelé akatanga kutakura jersey nehamba 10.
Pelé aiparidzirawo South American Championship. Mu 1959 mutambo iye akatumidzwa zita rakanakisisa mumutambo uye akanga ari muchengeti wepamusoro ne 8 zvinangwa, seBrazil yakauya yechipiri pasinei nekusava nehanya mumutambo.
Aine chinangwa chakakura, aizivikanwa nokuda kwekwanisiro yake yekufungidzira vadzivisi munzvimbo yacho uye kupedzisa mikana neyo yakarurama uye yakasimba yepfuti nerutsoka.
Mhando yaPele Yakasiyana Yokutamba
PaSantos, November 19 inozivikanwa se'Pelly Day 'kupemberera chiyeuchidzo chechinangwa chake che 1,000th.
Pele's 1000 Goal Mark
Pele ndeyechishanu pavashandi veHondo yeNyika yose vakanyora ne12 - uye wechipiri yeBrazilian yakagadzirirwa shure Ronaldo.
Apo Pele apedza basa, JB Pinheiro, mumiriri weBrazil kuUnited Nations, akati: "Pele akatamba mutambo wemakore 22, uye panguva iyoyo akaita zvakawanda kuti akurudzire ukama hwenyika uye ukama kupfuura imwe nhume chero ipi zvayo."
Pele akawana 92 hat-tricks, uye akawana zvinangwa zvina pazviitiko zve 31, zvishanu pazviitiko zvitanhatu, uye kamwe akawana hupfumi mumutambo mumwe. Uye zvizhinji zvezvinangwa zvaPele zvakagadzirwa nebhazikoro.
Pele: Bicycle Kick Master
Pele akawana zvinangwa zvitatu kana zvinopfuura kudarika nguva 129 munguva yebasa rake. 1 mune zvinangwa zvemabasa. 1, 280 mu 1, 360 mitambo. Anobatawo nhoroondo yepasi nekuda kwehupenzi. 92 yakazara. Pele haana kumbobvira atenda muzvikwereti. Akamboti: "Chirango inzira inotyisa yokupinza."
Muna 1997, Pele akapiwa kukudzwa kweBritain Knighthood. Akasarudzwa semutungamiri wemitambo muBrazil muna 1995, kushumira kusvika 1998. Akasarudzwa mumutambo wezana remakore neAsia Olympic Committee (IOC) mu1999. Pele akaendeswa kuNational Soccer Hall of Fame mu1999.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Jersey inokosha
Apo Pele akaitamba kuNew York, vazhinji vevadzivisi vake vaida kupatsanidza shati naye kuti kambani yacho yaifanira kupa mumwe wevadzivisi vavo shati mushure mechikamu chose. "Pele ndiye akakwezva zvikuru," anodaro Gordon Bradley, mumwe wevadzidzi vemakwikwi panguva iyoyo. "Dzimwe nguva taizofanira kutora 25 kana 30 shirts pamwe chete nesu kuti titevedze - kana zvisina kudaro, hatingazombobuda kunze kwataiti."
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kwete shamwari yaMaradona
Pele naMaradona havasi shamwari. Muna 2010, Pele akati nezveArginia: "Haasi muenzaniso wakanaka kune wechidiki. Akave nechipo chaakapiwa naMwari chokukwanisa kutamba bhora, uye ndicho chikonzero iye ane mukana. "
Mhinduro yaMaradona: "Ndiani ane hanya naPre anoti? Iye ari mu museum. "
The Pele / Maradona Rivalry
Pele akati muna 2006: "Kwemakore e20 vakandibvunza mubvunzo iwoyo, ndiani mukuru? Pele kana Maradona? Ndinopindura kuti zvose zvaunofanirwa kuita ndezvekutarisa chokwadi - ndezvipi zvinangwa zvaakakonzera nerutsoka rwake rworudyi kana nemusoro wake? "
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -UN Ambassador weNGO
Mumwe mutauriri pamwe chete nomutambi wenhau, Pelé akakurudzira mushonga unorwisa mishonga asati apikisana naG Diego Maradona naMichael Platini musi waMay 23, 1988 muFrance. Akashandisa mukurumbira wake kuti aite mutsauko mushure mebhola, achishanda sehurumende yeUnited Nations yezvisikwa uye zvakatipoteredza.
Pele: Mumiriri weAUN Goodwill
Pele ave achishanda semusangano weUNICEF Wenyasha uye seve ambassador yeUnited Nations, achishanda kudzivirira zvakatipoteredza nekurwisana nehuori muBrazil.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Mutambo Wemavhidhiyo Anonzi Pashure Pake
Pele aiva nemutambo wemavhidhiyo ainzi shure kwake kumashure e1980s anonzi 'Pelé's Soccer'. Yayo yemutambo wenhabvu yeAtari 2600, uye inogona kunge yakangodaro yekare yakakurumbira tie-mumutambo wevhidhiyo. Mutambo unokubvumira kuti uone zvinangwa muSouth America.
Soccer Soccer Game
Mukuri kutamba, iwe unotangira mumigwagwa yeBrazil, uye unoita zvinyorwa zvishoma kuti uonekwe muchengeti wemagariro. Zvadaro, enda kumiganhu mitsva munzira yako kuenda kunhandare huru.
Pele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kukurudzira Boot Yake
Sezvo iye akagadzirira kubvisa mumutambo munguva yeMexico '70, Pele akabvuma kumupikisa kuti aifanira kusunga chikwata chake. Makamera akasangana mukati kuti abudise mberi mabhomba ePuma - iyo kambani yakazoona kukura kukuru kwekutengesa.
Dennis Bergkamp Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Roberto Carlos Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Ricardo Kaka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Rivaldo Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts